श्रीमतीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर प्रहरी कार्यालय छिरेपछि...- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
श्रीमतीलाई भेन्टिलेटरमा राखेर प्रहरी कार्यालय छिरेपछि...
काठमाडौँ — मंगलबार दिउँसो १२ बजेर ९ मिनेटमा बा २ झ ४२६८ नम्बरको एम्बुलेन्स महानगरीय प्रहरी वृत्त तीनकुनेको गेटबाट भित्र छिर्छ । गेटमा बसेका प्रहरी सोधखोजविनै मुल गेट खोलिदिन्छन् । एम्बुलेन्सको पछाडिको ढोकाबाट एक युवक ओर्लिन्छन् अनि ह्वील चियरमा रहेकी बिरामीलाई उतार्न सहयोग माग्छन् । प्रहरीहरूकै सहयोगमा ती बिरामी महिलालाई भुइँमा राखिन्छ ।
उनलाई किन प्रहरीमा ल्याइयो ? को हुन् उनीहरू ? वरिपरि भेला भएकाहरू जिज्ञासु नजरले हेर्न थाल्छन् । एकाएक यहाँ भीड जम्मा हुन्छ । ह्वील चियरको एकातिर पिसाबको पाइप झुन्ड्याइएको छ । बिरामीको घाँटीमा राखिएको पोर्टेबल पाइप (बोकेर हिँड्न मिल्ने) भने भेन्टिलेटरमा जोडिएको छ । यसकै सहायताले ती बिरामी सास फेरिरहेकी छन् ।
उनी हुन्, चेली तामाङ । जो जेब्रा क्रसबाट बाटो काट्ने क्रममा मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते बन्न पुगिन् । तीनकुने प्रहरी वृत्तअगाडिको जेब्राक्रसमा बा ६५ प ७५४९ नम्बरको मोटरसाइकलले २०७३ चैत २५ मा ठक्कर दिएपछि उनको अवस्था यस्तो बनेको हो । दुर्घटनापछि उनी उठ्न र बोल्न नसक्ने गरी थलिएकी छन् । उनी दुई वर्ष १० महिनादेखि भेन्टिलेटरमा छिन् ।
‘ठक्कर दिने कोही पनि सम्पर्कमा नआएपछि जहाँ दुर्घटना भएको हो, त्यहीँको प्रहरीलाई दबाब दिन बिरामी लिएर आएको हुँ,’ चेलीका श्रीमान् वसन्त झोँक्किए, ‘जसले मेरो श्रीमतीको हालत यस्तो बनायो, उसैले खर्च गर्ने दायित्व होइन ?’
यसअघि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी अगाडि पनि उनले श्रीमतीलाई ह्वील चियरमा राखेर लगेका थिए । त्यहाँ लैजाँदा पनि ठक्कर दिने चालक र मोटरसाइकल धनी सम्पर्कमा नआएको भन्दै उनले मंगलबार भेन्टिलेटरबाट झिकेर श्रीमतीलाई तीनकुने लगेका हुन् । उनको साथमा थिइन्, आठ वर्षीया छोरी आलिया पनि ।
‘अस्पतालमा उपचार खर्च नभएर मार्नुभन्दा त मैले कस्तो मान्छेको स्याहार गरिरा’छु भन्ने थाहा दिन पनि श्रीमतीलाई प्रहरीमा ल्याएको हुँ,’ उनी भनिरहेका थिए । श्रीमतीको उपचारमा खटिएका बसन्त ट्रमा सेन्टरमै गार्डको काम गर्छन् । दिनभरि श्रीमतीको स्याहार गर्छन्, उपचार खर्चमा भरथेग गर्न राति श्रीमती राखेको पाँचौ तलामा गार्ड बस्छन् । अस्पतालको सुरक्षा गार्ड व्यवस्थापन गरेको निजी कम्पनीले वसन्तलाई मासिक १८ हजार दिने गरेको छ ।
रातको निद्रा वास्ता नगरी उनी मंगलबार भने अचेत श्रीमतीलाई लिएर प्रहरीकहाँ पुगेका हुन् । विदेशमा काम गरेर कमाएको ५० लाख खर्च गरेर पनि थप ४० लाख ऋण रहेको उनले बताए । ‘१३ महिना आइसीयूमा राखेर उपचार गराएँ,’ उनले भने, ‘अहिले ट्रमा सेन्टरको ५१४ नम्बर बेडमा राखेर उपचार गराइरहेको छु ।’ तीनकुने प्रहरी वृत्तका प्रहरी नायव उपरीक्षक दुर्गाप्रसाद रेग्मीले बिरामीको अवस्था नाजुक देखेर ठक्कर दिने मोटरसाइकलका धनी रेशम केसीलगायतलाई बोलाएर मंगलबार छलफल गरेको बताए । ‘मेरो छोराको बाइक भए पनि अर्को मान्छेले चलाउँदा दुर्घटना भएको हो,’ रेशमले भने, ‘हामीले १८ लाख खर्च गरिसक्यौं । थप १० लाख रुपैयाँ र बिमाबाट आएको रकम दिन तयार छौं ।’ छलफलमा वसन्तले २५ लाख मागेको उनले बताए । ‘यतिका रकम त हामी दिन सक्दैनौं,’ रेशमले भने ।
छलफल चलुन्जेल चेली बोल्न खोजिन् तर आवाज निस्किएन । उनको घाँटीमुनिको भाग चल्दैन  । यताउता फर्कनसमेत सहारा चाहिन्छ । उनलाई खाना खुवाउने, दिसापिसाब गराउने काममा वसन्त खटिने गरेका छन् । भेन्टिलेटरविना उनी सास फेर्न सक्दिनन् । वसन्तले भेन्टिलेटर मिलाए र श्रीमतीलाई प्रहरी वृत्तबाट पुनः ट्रमातिरै फर्काएर ल्याए । प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०७:४३
ठगिनुहोला अनलाइन सपिङबाट
माघ २९, २०७६ लीला श्रेष्ठ
काठमाडौँ — महानगरीय अपराध महाशाखाले अनलाइनमार्फत ठगी गरेको आरोपमा एक भारतीय नागरिकसहित पाँच जनालाई केही दिनअघि पक्राउ गर्‍यो । उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा व्यवसाय गरी बस्ने उनीहरूले अनलाइनमार्फत चिट्ठाको प्रलोभनमा पार्दै ठगी गरेका थिए ।
पीडितको सूचनाका आधारमा भारत घर भई काठमाडौं–१७ क्षेत्रपाटी बस्ने ४९ वर्षीय नवीन अग्रवाल, बौद्ध बस्ने ५२ वर्षीय आनन्द अग्रवाल, रौतहट घर भई सतुंगल बस्ने २८ वर्षीया शर्मिलाकुमारी श्रेष्ठ, मोरङ घर भई हाँडीगाउँ बस्ने २९ वर्षीय अलंकार जैन र बालाजुका ४० वर्षीय सुशील गुरुङ पक्राउ परे । उनीहरूलाई ठगी मुद्दामा कारबाही थालिएको महाशाखाका प्रवक्ता एसपी मुकेशकुमार सिंहले बताए ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट साथी बनाई विदेशबाट ब्रान्डेड ल्यापटप, मोबाइल, क्यामेरा, घडी, शृंगारलगायतका सामान सस्तो मूल्यमा पठाइदिने विज्ञापन गरी ठगी गर्ने क्रम बढेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘ठगीका नयाँ तरिका देखिन थालेका छन्, प्राविधिक हिसाबले हामी अनुसन्धान गर्नेका लागि पनि निकै नौला छन्,’ केन्द्रीय साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसएसपी नविन्द अर्यालले भने, ‘हाम्रो जनशक्ति थोरै छ । त्यसमा पनि पछिल्लो प्रविधिसँग अपडेट हुन सकेका छैनौं ।’
अनलाइन सपिङ व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी आधार छैन । आफूखुसी वेबसाइट खोलेर अनलाइनमार्फत सपिङ सेवा दिनेलाई निगरानी गर्ने आधार नहुँदा ठगीको धन्दा बढेको प्रहरीको भनाइ छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा राजधानीमा सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सपिङलगायत विभिन्न नयाँनयाँ जुक्ति अपनाउँदै ठगी गरेको १५४ उजुरी दर्ता भएका छन् । गत आवमा ३०१ उजुरी दर्ता भएका थिए ।
फेसबुक, ह्वाट्स एप, ट्वीटर, इमो, भाइबरलगायत सामाजिक सञ्जालबाट विदेशी नागरिकका नाममा आईडी खोलेर ठगी गर्ने क्रमसमेत बढेको प्रहरीले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार विदेशी नागरिकको नाममा प्रोफाइल तयार गरी नेपालीलाई साथी बनाएर बहुमूल्य सामान, बेलायती पाउन्ड तथा अमेरिकी डलरसमेत भएको पार्सल पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्नेको संख्या बढेको हो । त्यस्ता ठगीमा संलग्नहरूले बहुमूल्य सामानको फोटोसमेत पठाई ‘पार्सल लिएर मेरो मान्छे नेपालमा आउँदै छ, सामान लिनु’ भन्दै सयौं व्यक्तिलाई ठगेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले बताए । पार्सलको नाममा ८० लाख रुपैयाँसम्म ठगी गर्ने व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सामाजिक सञ्जालबाट विदेशी नागरिकका नाममा आईडी खोलेर ठगीधन्दा चलाउने दुई विदेशीसहित पाँच जनालाई हालै पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा राहदानी नम्बर ए ०९०३९०७२ बाहक नाजेरियाका ४० वर्षीय साइरिल चिनोन्सो आइबेस, राहदानी नम्बर १७ एपी ४१८७१ बाहक आइबेरिकोष्टका २३ वर्षीय आसापे एडजी पिइरजिन, चितवन घर भई काठमाडौं बस्ने ४० वर्षीय रामचन्द्र गैरे, ठमेलका ४९ वर्षीय उमेश श्रेष्ठ र चितवन घर भई बनस्थली बस्ने ३१ वर्षीय हरि ओझा छन् । नेपालमै रहेको ९८०३८०४८५८ नम्बरबाट विदेशी नागरिकले फोन गरी ‘विमानस्थलमा आएको सामान छुटाउन नेपाली पैसा चाहिने भयो’ भनेर विभिन्न व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ठगी गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ । पक्राउ परेका सबैलाई ठगी मुद्दामा कारबाही थालेको ब्युरोले जनाएको छ ।
विदेशीको क्रेडिट कार्ड डिटेल चोरी अनलाइन सपिङ गर्ने बाग्लुङ गलकोट–९ घर भई काठमाडौंको बालाजुमा बस्दै आएका ३२ वर्षीय तेजिन्द्र केसीलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई जापानमा बस्ने नेपाली साथीले जापानी नागरिकको क्रेडिट कार्डको नम्बरलगायतका विवरण भाइबरमार्फत पठाएका थिए । केसीले जापान पठाइदिन्छु भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट रकम ठगी गरेकाले उनीमाथि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनबमोजिम अदालतमा मुद्दा पेस गरेको ब्युरोले जनाएको छ । सस्तो मूल्यमा सामान पठाइदिने भन्दै उनले करिब ८० लाख रुपैयाँ रकमसमेत ठगी गरेको पाइएको छ ।
प्रकाशित : माघ २९, २०७६ ०७:४०